Rindrambaiko maimaim-poana sy fahalalahana misafidy | Avy amin'ny Linux
Rindrambaiko maimaim-poana sy fahalalahana misafidy
eliotime3000 | | hafa
Miala tsiny raha nametraka an'ity pikantsary ity aho, fa nandeha namakivaky distros famotsorana fotsiny aho.
Miarahaba antsika rehetra. Amin'ity tranga ity dia tonga aho hanome ny fomba fijeriko ny atmosfera mitranga ao amin'ny Free Software ary ny fahalalahana misafidy (na fanapahan-kevitra) mamela antsika.
Na dia nametra-panontaniana aza ny mpiara-miasa aminay nano ny fanajana ao amin'ny latabatry ny mpampiasa (sy ny mpampiasa) ny birao GNU / Linux, ny marina dia ny panorama GNU / Linux dia somary manjelatra amin'ny resaka paradigma fahalalahana sy fahalalahana hanapa-kevitra, samy toa tsy mifanaraka.
Ny tena marina dia misy ny tsy fitoviana eo amin'ny filozofia Free Software sy ny filozofia fahalalahana misafidy, satria raha mifikitra be loatra amin'ny fahalalahan'ny Free Software isika nefa tsy misy fahalalana mialoha dia hiafara amin'ny fanboy sy adala isika.
Ny foto-kevitry ny Free Software dia mifototra indrindra amin'ny fitsipiky ny Free Software, izay tsy maintsy zaraina ny mimari-droa sy ny kaody loharano. Ho fanampin'izay, izy ireo dia manome soso-kevitra izay fahazoan-dàlana maimaim-poana izay tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana ny kaody loharano na ny binaries hahazoana tombony.
Raha ny hevitra momba ny loharano misokatra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny Rindrambaiko Maimaimpoana izy io, saingy mamela antsika hampiasa ny tombony avy amin'ny mimari-droa fa tsy avy amin'ny kaody loharano, ka afaka omena loharanom-bola handoavana iray isika izay ilana hafa. Ohatra iray tena mazava amin'izany Google Chrome / Chromium.
Ankehitriny, mipetraka ny fanontaniana: manaiky ve ireo mpanohana ny tsirairay amin'ireo fitsipika ireo? Tsia ny valiny tsia.
Ny marina dia misy ny ady tsy misy farany eo amin'ireo fitsipika roa ireo izay nikitika ireo lafin-javatra tsy misy dikany fanaingoana ny tontolon'ny birao, ary lasa mandreraka tanteraka ity resaka ity.
Etsy ankilany, ny fiankinan-doha amin'ny rindrambaiko tompona toy ny bloc propriété an'ny Kernel tenany sy ny mpamily tompona fiara sasany dia manasarotra antsika hanana solosaina maimaimpoana tanteraka, noho izany dia toa tsy misy ilana azy ny disko toa an'i Trisquel na Parabola satria manana fitaovana Tsy mandeha tsara amin'ny mpamily maimaimpoana izy io (raha ny tokony ho izy dia sarotra be amintsika ny manamboatra ny mpamily maimaimpoana) ary amin'ny tranga maro dia tsy mandeha ny kernel Linux-libre satria tokony ho fisaorana noho ny tsy fisian'ireo banga ilaina.
Raha ny amiko, ny olako dia tsy ny tsiambaratelo amin'ny Internet, satria efa ela aho no very izany rehefa nisoratra anarana tao amin'ny Hotmail, ary nisoratra anarana tamina tranonkala maro hafa mandra-pahatongan'ny fiainako ampahibemaso ka Mahita ahy mora foana i Google. Ankehitriny, ny olana mahazo ahy (sy ny maro hafa mety hitranga) dia ny fampiononana ateraky ny fampiasana rindrambaiko Maimaimpoana.
Amin'izao fotoana izao dia faly aho miaraka amin'ny Debian y Slackware, saingy amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra aho Arch Linux, noho izay, misaotra an'i tutorial avy amin'ny mpiara-miasa amintsika @elav hametraka azy miaraka KDE, dia manampy ahy betsaka ka sao very eny an-dalana.
Na dia mety mila fihady vitsivitsy aza aho amin'ny alàlan'ny alàlan'ny Wiki Wiki mba hanitsiana ireo hadisoana nataoko teny an-dàlana (ary amin'izao fotoana izao, hanome ny hevitro momba ity distro be ity aho saingy afaka herinandro vitsivitsy afaka mankafy tanteraka azy io).
Raha hisy fotoana hanaovana tutorial fametrahana Parabola GNU / Linux-LibreHisy, fa farafaharatsiny avelao aho hifoka vetivety mba hahafahako mitantana tanteraka an'io distro io (tiako matetika ny distro semi-automatique, saingy hitako fa tsy maninona ny fanaovana asa tanana hafahafa).
Raha hiverenana ny resaka, ny marina dia ity korontana nateraky ny Free Software sy ny safidy malalaka ity dia tokony hifarana amin'ny fifanarahana am-pilaminana, satria be loatra ny vovoka ho an'ny resaka teôlôjika fotsiny fa tsy azo ampiharina, manao ny tetezamita amin'ny fampiasana ny Free Software ary loharanom-baovao misokatra ho feno tsilo sy misafotofoto noho ny hatramin'izay.
Tsy maninona fa be ny fizarana GNU / Linux miparitaka erak'izao tontolo izao, fa ny angatahina dia ny fahamatorana ho an'ireo miaro io toerana misy ny Free Software sy ny fandeferana (ary ny fanajana) ho an'ireo izay mbola tsy afaka misaraka amin'ny singa tompony noho ny antony hafa, ankoatr'izay dia tsapan'izy ireo fa tsy ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny GNU / Linux, satria misy koa Solaris, BSD, Hurd, Tron ary ireo rafitra miasa hafa izay tsy Windows na Mac OSX.
Manantena aho fa ny "manifesto" -ko dia tokony hisaintsaina an'io lohahevitra io, ary ny flamewar dia tsy noforonina ho an'ny zavatra diso fandray sy / na diso fandikana.
Misaotra betsaka ary mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Rindrambaiko maimaim-poana sy fahalalahana misafidy
81 hevitra, avelao ny anao
Eritreritra tsara izany, tsara raha hita amin'ny bilaogy sy forum rehetra.
mmm Izaho dia iray tamin'ireo mpiaro ny linux mandra-pahafatiny. Avy eo nihaona tamin'ny tontolo tena izy aho ary nahita fa adala nosasana ati-doha fotsiny aho.
Mamaly an'i lukas
Eny, mampiasa ny GNU / Linux aho mba hahamora azy, tsy ho an'ny fahalalahana sy "fiainana manokana" omen'ny distros mahazatra indrindra.
Ny olona tsy mahatakatra ny fahalalahana satria nanohy nandoa ny fahazoan-dàlana tamin'ny fikandrana aho, na dia tsy manana na inona na inona aza izy ireo ankehitriny, efamira ireo. Fantatro tsara ny Linux ary atokisako amin'ny asako isan'andro ...
Eto aho dia nahita kinova hafa izay milaza izany ihany
(Fampitandremana: politika be io ary miteraka fihomehezana)
Eny, nanoratra ity lahatsoratra ity ho tsy miandany araka izay azo atao aho mba hisorohana ny flamewars.
Tedel dia hoy izy:
Eny, tsy dia mifantoka loatra amin'ny lohahevitry ny fahalalahan'ny rindrambaiko aho (nahazo fijery ratsy mihitsy aho tamin'ny resaka Fedora indray mandeha noho ny fanehoan-kevitra momba izany) toy ny nataoko tamin'ny fahalalahana misafidy. Heveriko fa tsy nahomby ireo "orinasa teknolojia lehibe" tamin'ny tsy fanomezana mangarahara. Heveriko fa tokony hampiasa izay mahasoa anao ianao fa tsy hanasarotra ny tantara. Heveriko fa ny zavatra tsara dia tokony halaina tahaka sy hatsaraina, ary mamela izany ny rindrambaiko maimaimpoana. Heveriko fa tsara ny fisian'ny olona mandinika fa tsy manandrana manao zavatra hafahafa ao an-damosintsika izy ireo ary mieritreritra aho fa tsara kokoa raha tsy manana fikasana hanao zavatra ao ambadika aza izy ireo.
Izany no antony ampiasako ny Linux: satria toa azo itokisana kokoa izy io amin'ny hevitry ny fiarovana ny solosainako.
Saingy tsy midika izany fa aleoko ny mpamily Nvidia tany am-boalohany noho Noveau, na Flash Player noho Gnash. Miasa tsara ho ahy izy ireo ary ampiasaiko izy ireo. Izany fotsiny.
Mamaly an'i Tedel
Toa efa hitako fa nilaina ny paositra toa izao, miombon-kevitra amin'ireo soso-kevitrao aho. Isaky ny mahita adihevitra Byzantine eo amin'ireo mpiaro mafy ireo toerana ireo aho, toa hitako fa manatrika fivoriana iray eo amin'ireo mpiorina ara-pivavahana izay manao ny "fotopampianaran'izy ireo" ho ivon'izao rehetra izao ary mitady hametraka ny vinan'izy ireo amin'ny ambiny ihany koa . Heveriko fa io fihetsika "mitory ny vaovao tsara" io dia tsy manampy amin'ny fanaparitahana ny SL ary mahatonga azy ho toy ny zavatra 'geeks' tsy mandefitra.
Raha ny hevitro, ny fiarovana ny safidy malalaka dia manomboka amin'ny fanekena ny zon'ny olona tsirairay hampiasa ilay OS hitany fa mety. Andeha isika hahatsiaro fa ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny solosaina (amin'ny heviny malalaka, izay ampidiriko fitaovana hafa manan-tsaina), dia tsy inona akory fa fitaovana ampiasaina hiasa, hifampiresaka, hifalifaliana, sns. ampiasao ilay tianao indrindra na mahafapo anao indrindra, nefa aza manokana fotoana fohy hijerena filozofika momba ny fahazoan-dàlana nahitana ny kaodinao, raha misy misalasala ny amin'izay lazaiko, mijanòna hieritreritra hoe firy amin'ireo mpampiasa fitaovana miaraka amin'ny Android no mahalala fa mifototra amin'ny GNU / Linux, mahatonga anao ho "mpiaro" ny Open Source ve izany?
Eny, eo no alehako, mba hampisehoan'izy ireo izay lazainy amin'ny fihetsika fa tsy amin'ny teny fotsiny.
Adinonao fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia manana fototra filozofika ary orientika etika tsy azo afenina. Raha esorintsika ny toetrany filozofika, maninona isika no mila rindrambaiko maimaimpoana, miaraka amina windows sy apple dia manana be dia be isika raha ny farany no mason-tsivana dia ny adobe flash player dia tsara kokoa noho ny gnash sns ... raha ny zavatra tadiavintsika dia mandeha daholo ny zava-drehetra, tsara kokoa ny mijanona amin'ny windows.
Mitovy tsy misy valaka amiko ny eritreritro, rehefa vitako ny diplaomako dia te hianatra programme tsara aho ary manampy amin'izay azoko atao hanatsarana ny rindrambaiko ampiasaiko, io no fomba tokana anaovana azy tsara kokoa noho ilay an'ny tompony.
Ny olana dia amin'ny windows xD tsy mandeha ny zava-drehetra, ary tsy miorina tsara koa, ankoatr'izay sarotra ny manome endrika azy araka ny itiavan'ny olona azy.
Ny olana eto dia afangaro ny filozofia fsf sy ny filozofia openource, ary maro amintsika no manakaiky kokoa ny openource, mampiasa izay ampiasaintsika isika, satria izany dia mahasoa antsika amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, tsy amin'ny foto-pisainana fa amin'ny tsiro. , teknika, fisehoana na inona.
Fahadisoana ny mampitaha ireo hevitra "Free Software" sy "open source". Mampifangaro poara amin'ny paoma izahay. Ny loharano misokatra dia fomba fampandrosoana ny lozisialy Ny rindrambaiko maimaimpoana dia foto-kevitra filozofika sy etika. Toy ny mampitaha ny fahalalahana miteny amin'ny fizotran'ny fanontana gazety. Ny iray afaka manompo ny iray hafa (indraindray tsy).
Ny hoe "manohana ny safidy malalaka" dia tsy voatery hidika hoe mino fa mitombina ny hoe misy olona afaka manapa-kevitra ny hanao izay tiany. Satria, ohatra, misy olona afaka "manapa-kevitra malalaka" hanaisotra izany fahalalahana izany amin'ny hafa. Izay ilay atao hoe «rindrambaiko maimaimpoana», tsy ny fametrahana, fa ny FITSARANA izay tsara indrindra etika (fa tsy ara-teknika) ...
Tena miombon-kevitra amin'ny itachi aho. Heveriko fa ny iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny etika marina. Ny toetra mampiavaka ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy ny fanaovana rindrambaiko mahomby fotsiny fa ny fanatsarana ny fiaraha-monina tsaratsara kokoa sy mahitsy kokoa. Heveriko fa tena ilaina izany ary izany no antony mahatonga ahy rehefa mampiasa rindrambaiko manana saingy maimaimpoana dia misy bibikely ao an-dohako izay manentana ahy hitady safidy maimaim-poana. Mampiasa linux aho ary mahazo aina kokoa noho ny windows (tsy misy fisalasalana), fa ny antony lehibe hampiasana azy dia satria ekeko ny filozofia ary satria mino aho fa hahasoa ny fiaraha-monina ny fanapariahana azy (ohatra mazava dia ny fitantanan-draharaham-panjakana). Raha ratsy kokoa noho ny windows ny linux dia mieritreritra aho (satria tsy mbola nisy ny toe-javatra) hijanona sy hiaro linux aho. Ny fampiasana ny ohatra an'i Charlie Brown, ny fampiasana android dia tsy mahatonga anao ho mpisolovava amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Raha fintinina, ny hoe manohana rindrambaiko maimaimpoana sy miaro azy dia midika hoe mino ny filozofia ary mampiasa azy na dia misy zavatra tsara kokoa ara-teknika aza. Manazava aho fa miresaka amin'ny fironana amin'ny ankapobeny. Raha misy rindrambaiko manokana tsy maintsy ampiasainao dia tsy tokony ho Taliban ianao, fa tsy maintsy manana ny toe-tsaina voalaza etsy ambony.
Mikasika ny tombotsoan'ny rindrambaiko maimaimpoana dia mino aho fa ambonin'izany rehetra izany no maharitra indrindra ary inona no hitahiry loharanon-karena betsaka indrindra ho antsika. Tsy misy dikany fa maro ny olona no tokony hampiasa vola sy fotoana hamoronana zavatra mitovy raha tsy ny fanatsarana azy io.
Raha fintinina dia mino aho fa ENY fa tsy maintsy arovana ny rindrambaiko maimaimpoana ary tsy ampy ny miteny hoe ampiasao izay mifanaraka aminao indrindra. Na izany aza, mino aho fa tsy tokony hametraka na hanao tsinontsinona isika fa handresy lahatra sy hampianatra amin'ny alàlan'ny fifampiresahana sy fifanakalozan-kevitra. Raha tsy izany dia inona no azonao dia ny hoe miaro tena ny olona na mandositra ilay lohahevitra.
Ny tena mila ataonao dia ny miady ho an'io rindrambaiko maimaimpoana izany ary manao azy mitovy na tsara kokoa noho ilay tompona, ball point.
Eny, izany no tiako hambara, hatramin'ny andro ankehitriny, tsy misy sahy mampiasa gnash satria tsy misy ilana azy ny mampitaha azy amin'ny flash player.
Manantena aho fa ianao koa dia mandray an-tanana ny fahafaha-mampiasa rindrambaiko maimaimpoana.
Ny andro (ampidiro ny vavahadin-dahatsary ho an'ny olon-dehibe) dia mijanona tsy mampihomehy ary mifamadika amin'ny html5, esoriko ny tselatra.
Manohana tanteraka an'io XD io aho, tamin'ny farany dia io no nampifamatotra ahy tamin'ny tselatra ahahha
Fa avelao ho haingana, satria reraka aho mahita bannera maromaro amin'ny flash ary mitaky ahy hametraka azy izy ireo (ary raha ny tokony ho izy, izany gnash dia mendrika fampandrosoana mendrika rindrambaiko tena malalaka).
Tsy mino aho fa tsy misy fampifanarahana eo amin'ny "filozofia" (arak'izany amin'ny marika nalaina, satria tsy azoko antoka fa azo antsoina hoe filozofia) ireo hevitra ireo amin'ny rindrambaiko malalaka sy ny safidy malalaka, hanombohana satria mikasika izany lohahevitra samihafa.
Ny fahalalahana resahin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia olana ara-etika izay tohanan'ny toby ara-dalàna, ary ny safidy malalaka dia filozofia saika ara-pinoana tanteraka amin'ny sisiny, ara-batana sy ara-pitondrantena.
Ohatra: Very ny fahafahany ny andevo nefa mitazona ny safidiny malalaka.
Ireo adala mitady ny hametraka ny heviny (na avy amin'ny SL izy ireo na zavatra hafa) dia ireo izay tsy mahalala ny atao hoe fahalalahana, ary io aloha no tsy maintsy fantatrao hoe inona izany, manome lanja sy miaro azy.
Mikasika ny SL sy CA, heveriko fa misy lesoka, mamela anao hahazo tombony amin'ny rindrambaiko ny rindrambaiko malalaka, afaka manao rindrambaiko ny olona rehetra, mamoaka ny kaody, mamoaka azy eo ambanin'ny GPL ary mivarotra ireo bizina (misy olona te-hividy azy io avy amiko izany zavatra hafa 🙂).
Ny tsy mendrika dia ny maka ny asa efa nataon'ny olon-kafa, manova ny sary masina, ny anarana ary mivarotra azy.
Ary farany, ny fitaovana sy rindrambaiko / mpamily fananana.
Tsy maintsy tadidinao fotsiny ireo dingana amin'ny fisafidianana ny fitaovako.
Loharano (olombelona, ​​fahalalàna ary ara-bola) -> Inona no tiako (sy vitako) atao -> inona ny rindrambaiko mila ataoko azy -> inona ny fitaovana ilaiko amin'izany rindrambaiko izany.
(Angamba hodiako ny iray, saingy efa ela aho no tsy nampianarina azy tao amin'ny kilasy fitantanana foibe informatika)
Ary avelako ohatra roa ianao.
1. Loharano (mpiasa 5, fandaharana antonony / avo lenta, renivohitra kely)
2. Ny tiako hatao: mamolavola pejin-tranonkala miorina amin'ny fenitra maimaimpoana nefa mitazona etika sy fiainana manokana ho an'ny orinasako, ary koa ny mpanjifako sy ny mpampiasa azy.
3. Inona ny rindrambaiko ilaiko: mifototra amin'ny zava-misy fa tsy afaka mandoa fahazoan-dàlana aho, mitady ny tombotsoan'ny rindrambaiko maimaimpoana ary tsy manana olana amin'ny fametrahana terminal, Parabola miaraka amin'ny libreoffice ho an'ny antontan-taratasy, gimp2 + krita ho an'ny sary.
4. Hardware. Ny solosaina misy i3 dia tsara ho an'ny fandaharana ary i5 ho an'ny famolavolana sary. Horonan-tsary Intel sy karatra tambajotra mifanaraka aminy.
Vokany, tsara daholo.
1 Loharano. Tanora manana fahalalana salantsalany ary 2,000 $ ao anaty kitapo.
4. Fitaovana, i7 xtreme, 2 nvidia ao amin'ny SLI ary RAM 16 GB rehetra miaraka amin'ny overclock.
3. Rindrambaiko, trisquel satria mifototra amin'ny Ubuntu fa tsy misy firaisana satria tsy azoko.
2. Ny tiako hatao. Milalaova ny farany aminay sy ny lalao PS3 manokana.
Vokatra. Fitarainana an'arivony ao amin'ny forum momba ny GNU / Linux sy ilay zatovo mitsambikina roa tongotra eo amin'ny monitor-ny.
Eny, raha ny fantatro, hatreto tsy mbola nahita tranga aho fa tena mivarotra mimari-droa izay mampiasa kaody GPL ny loharano loharanom-pahalalana (toy ny tranga misy amin'ny Ares, izay tsy mivarotra ilay mimari-tena ho zavatra ara-batana, fa manome anao serivisy izay "andoavanao" hiditra amin'ny tamba-jotra P2P, na dia Sourceforge, nilaozana aza ny kaody loharano niavian'izany.
Raha toa ka misy rindrambaiko manana kaody Apache, BSD ary fahazoan-dàlana hafa dia manome anao izany fotodrafitrasa ahazoana tombony avy amin'ireo mimari-droa fa tsy avy amin'ny kaody loharano amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, na dia manampy ny varavarana aoriana indraindray mankany amin'ny binary roa farany aza.
Saingy, tsy hitako fa mahazo tombony mivantana amin'ny kaody loharano na ny mimari-droa amin'ny loharano misokatra, fa raha mila ohatra ianao hoe ahoana no ahazoanao tombony amin'ny vokatra manana alalana LGPL dia misy Libreoffice
ary ny Novell Edition, ary tsy haiko raha manohy mivarotra izy ireo, fa taloha kosa raha toa ka nanao izany, OpenOffice Novell Edition, miaraka amin'ny lisansa GPL / Apache.
Ny lisansa rindrambaiko maimaimpoana dia miaro ny fahafahan'ny mpampiasa, ny olona, ​​fa tsy ny kaody, na ny olana ara-toekarena, ny loharano misokatra dia mahita fa manana kaody kalita tsara kokoa ao anatin'ny fotoana fohy kokoa.
Eny, saingy tsy mandrara anao tsy hanao kopia an'io amin'ny kapila ianao na hizara izany amin'ny namanao. Ny olana dia tsy maintsy mandoa ny fisoratana anarana ianao raha toa ka pas fa afaka mampiasa ny repo misy azy ireo nefa tsy misy manelingelina.
Tsy azoko ny farany, efa hitantsika fa raha misy ireo mivarotra ilay binary miaraka amina lisansa maimaimpoana (ohatra iray hafa dia ny PPSSPP, emulator psp izay amidy amin'ny googleplay ary manana fahazoan-dàlana GPL).
Fa mila rindrambaiko maimaim-poana mandrara ny fanaovana kopia sy mizara izany amin'ny namanao ve ianao? Tsy mitombina izany, mety hanafika ny firaisankinan'ny fiaraha-monina misy anao izany ary hamadika azy ho rindrambaiko manana.
Lohahevitra tena tsara nifanekeko, ary nanontany tena momba izany koa aho: https://blog.desdelinux.net/gnulinux-cual-es-el-camino-de-la-libertad/
Famihina lehibe sy oroka lehibe Eliotime.
Misaotra betsaka tamin'ny fiderana, Tina. Inona koa, tiako ho ianao no lohandohan'ny tonian'ity bilaogy ity, saingy noho ny antony tsy fantatra (ary tsy sahy mangataka ho fanajana) ianao dia miseho amin'ireo fotoana ireo.
PS: Mampiasa Chrome Canary ve ianao? Hatramin'ny ampiasako ny fananganana Chromium isan'alina mba hisorohana ny Google Update tsy haka loharano bebe kokoa amin'ny mpanodina ahy.
Ie! Eny tokoa, mampiasa Chrome Canary aho… tiako ny Chrome.
Ny fanontaniana hoe maninona aho no tsy mandray anjara intsony dia somary mifandraika amin'ny lohahevitrao. Ny antony dia maromaro:
1.-Ny asa dia mihinana ampahany betsaka amin'ny androko, ka aleoko manokana manokana ny fotoana kely ananan'ny fianakaviako, mba hanao fanazaran-tena na fialamboly hafa eny ivelany, hamaky boky ... ary koa manala kely ny tenako.
2.-Ny antony hafa dia ara-teknika. Mpamorona sary aho fa tsy injenieran'ny rafitra, ary mampiasa GNU / Linux aho satria tiako izany. Amin'io lafiny io dia tsy tonga amiko ny olan'ny lafiny teknika: tsy fantatro ny fomba fiasan'ny kernel an'ny OS ohatra, ary noho izany ny anjara birikiko amin'io faritra io - ilay lafiny teknika - dia foana.
3.-Eto ny lohahevitrareo dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo antony manosika ahy. Na dia marina aza fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy manelingelina ny tontolo iainana. Mazava ho azy fa ity tranonkala ity dia miaina, matetika, rivotra fanajana fa tsy afa-maina amin'ny fanaovana piraty koa isika. Ny tena marina dia mahasosotra ahy ny lohahevitra nosoratako, na ny mpiara-miasa hafa, adika, apetaka ary ampitaina amin'ny azy ireo amin'ny tranokala hafa ataon'ireo olona tsy mahalala fomba izay, ankoatr'izay, mameno ny vavany manome "lesona" avy amin'ny kalitao tsara sy etika avo lenta an'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Tsy tiako ihany koa fa ireo mpampiasa OS hafa dia voatsabo mijaly. Ao amin'ny 99% amin'ireo lohahevitra voasoratra eto sy amin'ny tranokala hafa, tsy misy tsy fahampian'ny fanehoan-kevitra maneso, fanesoana ny wit, izay manandrana manala baraka sy / na mampihena ny tontolon'ny OS hafa rehetra.
Raha amin'ireo tranga roa ireo dia voalaza fa fampiasana fahalalahana, amin'ny iray handika sy hametahana ary amin'ny iray hafa hanoratra izay tadiavinao fa tsy izay marina, ah! avy eo miantso ny fahalalahako handray anjara na tsia.
Raha ny amiko, raha mbola mianatra amin'ny institiota aho, farafaharatsiny afaka mizaha ity tranokala ity indraindray (ary eny an-dalana, manoratra bebe kokoa ho an'ity forum ity, na dia tsara kokoa noho ireo lahatsoratra aza ireo fampianarana ireo. hevitra). Indraindray aho dia mandeha miaraka amin'ny namako roa mba hahafahantsika miala sasatra kely ary hanala ny fisavoritahana.
Mikasika ny famolavolana sary dia te-hiasa amin'izany aho, na dia indrisy aza aho dia ao anatin'ny fikojakojana sy fanamboarana Windows PC (manana pejy ao deviantART, fa mandraka ankehitriny, tsy hitako ny fotoana anaovana sary an-tsary tena tsara miaraka amin'ny Photoshop sy Illustrator, fampiharana izay, miaraka amin'ny Creative Suite Adobe sy CorelDraw, zatra nampiasa). Liana amin'ny modus operandi an'ny rafitra fiasa sy ny fanaovana PC efa lany andro aho, izany no antony tiako hampiasa GNU / Linux.
Amin'ny lafiny plagiarism, eto fotsiny aho noho ny zava-misy fotsiny T! misy plethora copypastas sy creepypastas, miampy farafaharatsiny mba mahazo aina kokoa aho fa, indray mandeha, notsikeraina aho tamin'ny nanoratako lahatsoratra toa fanontaniana iray tamin'ny forum. Na izany na tsy izany, efa nihena ny tranokala ary misy pastebin amin'ny steroid hafa hisolo toerana azy, na dia aleony manitsy sy manoratra lahatsoratra ho an'ny Wikipedia Espaniola noho ireo pastebins ireo.
Ary teny an-dalana, tiako ihany koa ny Google Chrome (tsara, tiako ilay izy), saingy najanoko ny fampiasana Chrome tsy miovaova amin'ny Windows satria ny Google Update dia nampiadana ny PC-ko, nahatonga azy io ho miadana kokoa, noho izany dia voatery nampiasa Chromium builds isan'alina aho vao afaka milamina milamina ary tsy misy fahasarotana. Te hampiasa Chrome Canary aho, saingy mahita fa manana Google Updater sy fanavaozana matetika toy ny Arch Linux, avy eo dia nandeha nampiasa Chromium aho.
dmurana dia hoy izy:
Tsara foana ny mahita taratry ny fahasalamana toa anao. Eny, maro ny olona mahay miresaka momba ny fandeferana saingy lasa tsy mahazaka izy ireo rehefa manao izany, etsy ankilany faly aho namaky ny lahatsoratranao.
Momba izay lazainao momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny 'rindrambaiko malalaka' sy ny 'loharano misokatra', angamba tsy nohazavainao tsara izany, satria ny fitsipiky ny voalohany dia tsy milaza na inona na inona momba ny tsy fivarotana bizina na tsy ahazoana tombony, raha ny marina, raha na iza na iza azonao sintonina ny kaody loharano ary atambatra izany na mividiana binariary ary aparitaho an-kalalahana, rindrambaiko maimaimpoana io (ohatra ianao manonona, Chromium). Ilay 'loharano misokatra' kosa etsy andaniny tsy miraharaha ireo fitsipiky ny rindrambaiko maimaimpoana izay manomboka amin'ny etika ary manasongadina fotsiny ireo tombony azo tsapain-tanana amin'ny fahaizana mamaky ny kaody (na dia tompony aza). Fa amin'ny lafiny roa dia afaka mahazo vola ianao amin'ny fivarotana rindrambaiko sy / na serivisy.
Mamaly an'i dmurana
Eny, amin'ireo hevitra momba ny rindrambaiko maimaim-poana toy ny loharano misokatra, mety ho diso aho. Amin'ny farany, olombelona ihany aho.
Araka ny voalazanao, rindrambaiko maimaimpoana ianao dia manana fahalalahana hanao izay tianao atao miaraka aminy, fa raha tsy mitovy amin'ny misy ilay kaody loharano ny mimari-droa dia mety raha nandoa izany ianao dia mety iharan'ny scam. .
Ny tranga Chromium dia ny fampiasana ny fahazoan-dàlana BSD, izay mamela ny forkara fananana toa ny Google Chrome, izay mazàna manana singa sasany toy ny Google Updater ho an'ireo kinova natao ho an'ny Windows sy Mac.
Raha toa ka manana zana-pananana tompony i Transmission satria fantany fa omena alalana amin'ny GPL izy io, dia asa piraty iray manontolo izany. Raha manana fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana Apache na BSD izy, dia ho ara-dalàna tanteraka io fork tompony io.
Mikasika ny fahasamihafana misy eo amin'ny SL sy CA, esory na dia irery aza izany. Ny ambiny sisa tavela ary efa ny mahasamihafa azy io.
Miaina ary avelao hiaina ..
Misaotra an Andriamanitra noho ny fahasamihafana ... (raha tsy izany dia ho klona daholo isika rehetra)
mmm ary manontany tena aho fanintelony, maninona raha misoratra anarana ao amin'ny forum aho ary vao niditra azy ... tsy miseho ny avatarako rehefa mametraka hevitra ao amin'ny bilaogy aho?
Tokony hisoratra anarana amin'ny bilaogy koa ve aho?
ok .. ok… azoko… tsy maintsy misoratra anarana amin'ny WordPress ihany koa aho !! !! lol O_o
Ho lazaina izany. Ary koa, efa manana ny avatarako ao amin'ny Gravatar aho, ary mbola tsy nampakatra azy ireo tamin'ity bilaogy ity aho.
Ny olana amin'ny fananana distro maimaim-poana 100% dia ny fampiasana "normal" na iza na iza dia tsy mandeha izy io noho ny olana amin'ny mpamily, codec audio / video ary rindrambaiko hafa izay tena ilaina tokoa (toy ilay Flash Player efa nomena anarana).
Fa ilaina koa ny mampianatra sy mizara ny filozofia amin'ny SL. Ireo izay mahatoky tanteraka amin'izany ary tsy miankina amin'ny fonosana fananana dia afaka mampiasa distro maimaim-poana tsy misy olana na farafaharatsiny mba hifanaraka amin'ireo safidy hafa maimaim-poana rehefa mihamatotra izy ireo.
Raha izaho manokana dia heveriko fa maro amintsika izay mampiasa GNU / Linux, na dia manaiky ny SL aza isika ary manaparitaka azy dia ataontsika mba hahamora izany ary satria mora ny mampifanaraka azy amin'ny filantsika.
Misaotra anao namintina izay rehetra nosoratako.
ilay mpampiasa AleQwerty avy amin'ny taringa (www.taringa.net) dia mangalatra ny lahatsoratra rehetra amin'ity bilaogy ity (sy ny hafa navoaka tamin'ny teny espaniola) ary mamoaka azy ireo toa azy; efa nahazo fitarainana maro, ka mety ho liana amin'ny fandraisana andraikitra momba izany ianao.
Eny, amin'ny manaraka dia apetraho ny rohy referansy ary aza hadino fa ny lahatsoratra rehetra dia mampiasa Creative Commons (BY-NC-SA). Raha tsy izany dia omeko tsiny (satria voasoratra anarana ao amin'ny Taringa koa aho!).
PS: Hosokafiko ao amin'ny forum ity kofehy ity ao amin'ny fizarana "Blog stuff" sy / na "Trash" mba tsy hamenoana ilay lahatsoratra amin'ny lohahevitra midadasika.
asrafil dia hoy izy:
Marina fa amin'ny maha olona antsika dia tsy maintsy manaja ny fanapahan-kevitry ny hafa isika ary afaka manova ny rafitra fiasa arak'izay tiantsika.
Na eo aza izany, ny anton'ny fisian'ny rafitry ny GNU dia tsy ny hifaninana amin'ireo rafitra fiasa hafa, fa ny handao ny rindrambaiko fananana ary indrisy fa nohafohezina ity hevitra ity ho fanamorana ny fahafaha-manao.
Mamaly an'i asrafil
Raha izany dia tsy misy ny rafitra fiasan'ny GNU. Linux mihitsy dia rafitra iray miasa noho ny ezaky ny vondrom-piarahamonina sy ny orinasa, izay maro amin'izy ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny gnu sy ny firafitry ny fsf.
Mba hanazavana fotsiny.
Raha misy ny rafitra GNU / Linux, na ny rafitra fiasan'ny GNU (toy izany tsy misy zavatra hafa) dia tsy misy kernel izany fa tsy mandeha.
Ity no hitantsika rehefa mametraka, ohatra Arch, alohan'ny hametrahana ny Desktop lol
Ampiasainay isaky ny mandeha script bash izahay, isaky ny mifandray amin'ny Internet, isaky ny manangona sns.
Ny singa fototra sy tena ilaina indrindra (Bash, coreutils, GCC, sns.), Dia natao programa ho an'ny rafitra GNU avokoa, ary ao amin'ny maro amin'izy ireo dia misy kaody avy amin'i Richard Stallman, GCC ary Emacs ohatra.
Ny asan'ny fiarahamonina dia asa tsy manaisotra ny firaisan-kinan'ny tetikasa, ndao, na Windows sy Mac OSX aza dia tetik'asa mampifangaro tsy manam-petra ny ampahany amin'ny kaody manokana, avy amin'ny orinasa hafa (misy mividy azy ireo, ny sasany manakarama azy ireo) ary na kaody maimaimpoana aza.
Mampifangaro poara amin'ny paoma ianao, mazava ho azy fa maro ny kaody gnu, fa ny linux anio eo amin'ny birao dia mitovy bebe kokoa amin'ny android, Linux ary mihena kokoa ny gnu, ny olona mandeha amin'ny gcc mankany amin'ny llvm clang, fa tsy kde Tetikasa gnu io, ny rehetra ao amin'ny ubuntu dia tsy tetik'asa gnu, na ny kernel, na ny wayland, ary tsy nijery aho, sns sns sns.
Ie, eny, samy marina izy ireo saingy hitan'izy ireo amin'ny fomba fijery samy hafa.
Ny rafitra fototra dia misy fitaovam-kernel GNU + Linux, fantatsika rehetra izany. Ary ny fanampiana hafa dia avy amin'ny mpamorona ivelany amin'ireo tetikasa ireo.
Ny zava-mitranga dia ny pandev dia maka ho toy ny rafitra ny setin'ireo singa rehetra (kernel, fitaovana GNU, birao, fampiharana) ary ireo mpiasa izay miasa eto ambany ihany.
Saingy heveriko fa tsy misy ifandraisany amin'ilay lohahevitra izany, sa tsy izany?
Mahantra aho dia hoy izy:
Mazava be ny zava-drehetra ao amin'ny "boky" nataon'i stallman http://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software.es.pdf
Mamaly an'i Pobreotaku
Torohevitra tena tsara, na dia amin'izao fotoana izao aza, dia manana fandaharam-potoana hentitra aho hamakiana azy io tsara.
David gomez dia hoy izy:
Mazava be ny zava-drehetra araka ny fahitan'i Stallman, izay raha ny tena izy dia tsy mifanentana loatra amin'ny fiarahamonina afaka manao izay tiany fa tsy izay tadiavin'i Stallman.
Valiny tamin'i David Gómez
Fa raha ny eritreritr'i Stallman fotsiny dia tsy misy olona eo amin'ny fiarahamonina afaka manao izay tiany atao amin'ny PC an'ny hafa miaraka amin'ny rindrambaiko (toy ny TESTED backdoors any ivelany ao amin'ny Windows sy Mac) ary tsy mampandre anao (tsy mamoaka ny kaody). Ary isika rehetra dia tokony hanana ny zony, tsy ny hahafantatra izay ataon'ny rindrambaiko amin'ny angon-drakitrao, fa ny fampiasana an'io rindrambaiko io araka izay itiavako azy, izay sitrako sy hanovako azy araka izay itiavako azy ary zaraiko amin'izay tiako. Tiako ary amidio amin'izay tiako izany (tsy mitovy amin'ny maimaim-poana ny maimaim-poana !!). Ahoana ny fahasarotan'ny fahitana an'izany? Sa misy "olona" te-hametraka amintsika hoe "raha mandeha tsara kokoa dia tsy maninona izay ao anatiny"? Hihinana sakafo ve ianao raha voarara ny hahalala ny fanaovana azy? Hividy fiara ve ianao raha tsy voatery hampiasa azy io afa-tsy amin'ny lalana iray?
Io ny fahalalahana mandeha amin'ny làlana roa ... Raha tsy tianao dia aza vidiana, aza ampiasaina, aza jerena akory. Saingy tsy mila mametraka ny fomba fisainanao sy ny fahitana an'izao tontolo izao amin'ny hafa ianao.
Raha te-hikatona ny rindrambaiko aho dia olako, raha misy te hampiasa azy tsara, raha misy tsy te hampiasa azy dia tsara ihany koa. Fa ny tsy mety dia ity fitondrana mahery fihetsika ity dia tonga mitsabo ahy ho toy ny mpametaveta hafa satria fotsiny tsy tiako ny hanao zavatra araka ny fiheverany azy ireo.
"Ny fahalalahana dia mandeha amin'ny làlana roa ... Raha tsy tianao dia aza vidiana, aza ampiasaina, aza jerena akory."
Izany indrindra no TOLOM-BOLA Atoa Stallman, na dia mazava ho azy aza, tsy midika izany fa tsy azo kianina izy io satria tsy tianao ilay izy.
“Saingy tsy mila manery ny fomba fisainanao sy ny fahitana an'izao tontolo izao amin'ny hafa ianao. »
Okay, saingy ilaina ny fotoana voatondro ahafahana mahita fa misy RMS olon-kafa manandrana mametraka ny hevitry ny rindrambaiko maimaimpoana, izay tsy mitombina, satria ny hevi-dison'ny SL dia tsy haba, tsy mitovy amin'ny an'ny SP, raha raha mametraka izany:
- ny fomba tokony hitondranao ny programa.
- Raha afaka mandalina sy manova azy ireo ianao.
- Inona no tokony hataon'izy ireo.
- Ho an'izay azonao atao sy tsy azonao zarana ilay programa.
"Raha te-hanidy ny rindrambaiko misy ahy aho, raha misy te hampiasa azy tsara, raha misy olon-kafa tsy te hampiasa azy dia tsara ihany koa."
"Fa ny tsy mety dia ny fitondrana an'io ekstremista io ho toy ny mpametaveta na adjectif hafa satria tsy tiako ny hanao zavatra araka ny fiheverany azy."
Mampihomehy tokoa ny fametrahana adjectif amin'ny olona iray satria tsy tianao apetrak'izy ireo aminao izany.
Indrindra rehefa miantehitra amin'ny fitsarana an-tendrony ianao.
Mbola tsy naheno na namaky RMS aho nilaza fa mahery setra ny mpampiasa, raha ny marina na ilay rindrambaiko (izay voalaza ao, ary azoko atao ny manonona azy, dia ny lozisialy loharanom-baovao mihidy no mahatonga antsika hihevitra fa misy fampandehanana mavitrika malefaka.), Ary rehefa miantso izy mpamorona maloto noho ny fampiasana fahazoan-dàlana hananana, marina ny azy, satria fanahy iniana manitsakitsaka ny firaisankina ara-tsosialy, ary ratsy eto sy any Shina.
Ka tsy hoe mamono olona izy satria tsy manao zavatra araka ny nieritreretany azy fa tokony hanao ratsy izy, satria tsy manao etika.
"Izany indrindra no namporisihan'Atoa Stallman, na dia mazava ho azy aza, tsy midika izany fa tsy azo kianina izy io satria tsy tianao ilay izy."
Misy ny fitsikerana ny tsikera ary ilay lehilahy mahery fihetsika dia manana tantara lava be loatra amin'ny fanitsakitsahana ny tsikera ataony, eny fa na dia manimba ny fahalalahan'ny safidin'ny mpampiasa sy ny mpamorona aza.
"Eny ary, fa ilaina ny manana fotoana ihaonana izay ahitàna olona hafa RMS manandrana mametraka ny hevitry ny rindrambaiko malalaka ..."
Raha toa aho ka mampifandray amin'ireo atiny rehetra misy amin'ny Internet izay ahitantsika an'i Stallman manenjika orinasa, mpamorona (na dia mpiara-miasa aminy aza), olona maro hafa noho ny fampiasana ny zon'ny safidiny, ary ny fanaovana hadalana amin'ny besinimaro aza noho ny tsy fahafahany manao mifehy tena na mifehy ny hevitr'izy ireo, ny rafi-spam ao amin'ny bilaogy dia manakana ny lahatsoratro noho ny isan'ny rohy tafiditra.
"Eny, mampijaly olona ny mametraka adjectif ho an'ny olona iray satria tsy tianao apetrak'izy ireo aminao izany."
Tsy mangataka aminao aho na oviana na oviana mba tsy hampiasa adjectives (mila mamaky tsara ianao), ny lazaiko dia tsy mety ny milaza ampahibemaso fa ny tombontsoako amin'ny maha-developer na orinasa ahy dia manimba fotsiny satria tsy te hizara ny vokatry ny asako miaraka amin'izay te hahazo tombony amin'izany. Ethical na unethical, subjectif tanteraka izany, satria amin'ny faran'ny andro dia tsy manao ratsy amin'ny mpampiasa aho amin'ny tsy fizarako ny kaody, mainka raha tsy manery azy hampiasa ny vokatrao aho.
Raha heveriko fa manana fikasana ratsy amin'ireo mpampiasa ahy aho amin'ny alàlan'ny tsy famoahana ny kaodiko dia tsy tompon'andraikitra tanteraka, ary betsaka kokoa ny tsy tompon'andraikitra rehefa mikiakiaka avy eny ambony tafontrano aho.
Raha hiverenana amin'ny adjectif dia tsy famoronana ahy ny mahery fihetsika tafahoatra an'i Stallman fa io no fiantsoana ny karazana fitondran-tena rehefa te-hametraka ny heviny izy, famaritana diksionera io.
Hatreto aho dia mamela ny fandraisako anjara amin'ny andraikitra, satria mandany fotoana fotsiny ny fanandramana manao olona izay miresaka an-jambany amin'ny olona tsy manana fahaizana ara-tsaina hahatakatra fa mahatakatra fomba fijery hafa izao tontolo izao sy ny olombelona. , be pitsiny loatra izy ireo ka tsy afaka atao amin'ny teny mainty sy fotsy.
Raha mifanaraka bebe kokoa, tsy afaka miaraka amin'i David Gómez aho.
"... na dia manimba ny fahalalahana hisafidy ny mpampiasa sy ny mpamorona aza."
Fiampangana tsy marim-pototra hafa, mitaky fanendrena (miaraka amin'ny hadalana).
"Raha toa aho ka mampifandray ireo atiny rehetra misy amin'ny Internet izay ahitantsika an'i Stallman manompa ny orinasa, ny mpamorona (na dia ny mpiara-miasa aminy aza), olona maro hafa noho ny fampiasana ny zon'ny safidiny, ary ny fanaovana tsinontsinona imasom-bahoaka mihitsy aza noho ny tsy fahafahany hifehezana na hifehezana ny hevitr'izy ireo, ny rafitra spam ao amin'ny bilaogy dia manakana ny lahatsoratro noho ny isan'ny rohy tafiditra. "
Ity no mety ho fahadisoanao voalohany, miantso ny fisian'ny fitsapana maro ianao, saingy tsy mampiseho izany, raha iray fotsiny no ampy. Mamela ohatra "mahery fihetsika" ho anao aho:
-Mazava ho azy fa manana rantsantanana 8 eto an-tanako aho, fa raha alefako aminao ny porofo rehetra ananako dia ho tototra sy hipoaka ny kapila ataoko ka hiteraka fihetsika rojo izay hanapotehana ny planeta.
"Tsy mangataka mihitsy aho na oviana na oviana mba tsy hampiasa adjectif ianao (mila mamaky tsara ianao),"
Fanaporofoan-kevitra diso hafa, satria raha mankany amin'ireo isika dia tsy nilaza mihitsy aho hoe nangataka an'io ianao, ary mitanisa:
"... maninona ianao no TSY TIANY hametraka azy ireo aminao,"
Tokony hamaky tsara ianao, ny faniriana dia tsy mitovy amin'ny fangatahana
“Ny lazaiko dia tsy mety ny milaza ampahibemaso fa ny tombotsoako amin'ny maha developer ahy na ny orinasa dia mahery setra fotsiny satria tsy te hizara ny vokatry ny asako amin'ireo olona te handray soa amin'izany aho. "
Tokony hamaky tsara ianao,
Ethical na unethical, subyektiva tanteraka izany,
Fanaporofoan-kevitra diso iray hafa, ny etika dia mizara ho subjectiviste sy objectivist. Ny voalohany dia ho an'ny tena manokana araka ny itiavanao azy, saingy eto io dia tsy mihatra, satria rehefa miatrika olana momba ny fahazoan-dàlana dia mamela ny filozofia izy, miditra amin'ny sehatry ny lalàna, ny etika mifehy tena dia nampiasaina, nandritra ny ady hevitra an-jatony, manatratra ny zon'olombelona ananantsika ankehitriny, ny lalàm-panorenana politika an'ny firenena sy ny fanjakana, eny fa na ny fifanarahana asa ataon'ny orinasa manamboatra SP aza dia manana singa toy ny: "boky fampianarana etika ao anaty sy ivelan'ny orinasa"
"Eny, amin'ny faran'ny andro, amin'ny maha-developer ahy, tsy manao ratsy amin'ny mpampiasa iray aho amin'ny tsy fizarako ny kaody, mainka raha tsy manery azy hampiasa ny vokatrao aho."
Diso, raha hanombohana azy, satria tsy anjaran'ny mpamorona ny manapa-kevitra izay manimba ny mpampiasa na tsia, miankina amin'ny mpampiasa azy ihany izany.
Raha misy mpampiasa te hianatra momba ilay programa nandoavany vola ary voarara tsy hahita ilay kaody dia simba izy.
Ny fomba tsara indrindra hianarana fandaharana dia amin'ny alàlan'ny famakiana sy ny fanoratana kaody, izaho manokana mianatra zavatra betsaka amin'ny fijerena kaody an'ny hafa, ary tsy midika izany hoe maka tahaka na manaopy azy ireo aho.
"Raha heveriko fa manana fikasana ratsy amin'ireo mpampiasa ahy aho amin'ny alàlan'ny tsy famoahana ny kaodiko dia tsy tompon'andraikitra tanteraka, ary betsaka kokoa ny tsy tompon'andraikitra rehefa mikiakiaka avy eny ambony tafontrano aho."
Misy vakiana tsara. Ny fiheverana dia tsy mitovy amin'ny fisehosehoana.
Ary azo heverina fa ny kaody mihidy dia manafina fiasan-dratsy satria efa nametraka mialoha ho azy ireo izy ireo.
"Raha hiverenana ny adjectives, ny ekstremista an'i Stallman dia tsy famoronana noforoniko, fa ilay karazana fihetsika asehony rehefa te hametraka ny heviny izy, famaritana diksionera io."
Tokony hamaky tsara ianao, tsy nilaza aho hoe forona nataonao izany.
🙂 Atao lavanty izany. Manao veloma anao miaraka amin'ny hadisoana Ad Hominem ianao.
Ary ambonin'izany rehetra izany, toy ny fanao, miorina amin'ny fitsarana an-tendrony anao.
Iza no nilaza fa miombon-kevitra amin'ny hevitry ny RMS aho?
Mba hisorohana ny fikorontanana amin'ny ho avy dia manazava izany aho:
Manaiky ny lojika, ny demokrasia ary ny kapitalisma aho ary ny fahalalahana 4 an'ny FSF (tsy an'Andriamatoa RMS) dia lojika ary miaro ny demokrasia sy ny kapitalisma.
Raha diso aho dia asehoy porofo lojika matanjaka ary mihemotra aho, miaraka amin'ny fifonana.
Mampiasa rindrambaiko aho ary namolavola rindrambaiko manana, saingy tsy manana fenitra roa sosona aho, fantatro ny habetsaky ny herisetra naterak'izany ary tompon'andraikitra amin'ny zavatra nataoko aho, izany no fahalalahana fa tsy "manao izay tiako ", ary misy ny rakibolana tsy avelako handainga.
"1. F. Fahaizana voajanahary izay tsy maintsy ataon'ny olombelona amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, fa tsy tokony hihetsika, ka tompon'andraikitra amin'ny asany izy. " -RAE
Ka rehefa antsoin'izy ireo ho maloto aho, noho ny tsy fanaterako ny kaody lozisialy x, dia tsy nivadika ostrich aho, na nilalao ny masina na ilay nanafintohina.
Ka avy amin'ny:
"Oh! Tamin'ny fantsika Kristy, nantsoinao hoe maloto aho, raha tsy mahavita zavatra toa izany aho, olona manana fitondran-tena tanteraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako aho, ary milaza aho fa ara-pitondrantena sy tsy etika, satria ny etika, fuchi, dia mifehy "
Miaraka amin'ny tohan-kevitra miisa 5 diso sy fandikanteny diso maro hafa momba ilay lahatsoratra (tsy sahiko ny milaza fa fanahy iniana izy ireo) sarotra ny mifampiresaka, koa manao veloma ny lohahevitra aho.
Stallman dia maniry ny hampiasa ny rindrambaiko araka ny voalazanao ny mpampiasa tsirairay ... saingy misy fetrany: raha manao fanovana ianao dia TSY MAINTSY mamoaka ny kaodiny ary tsy azonao atao ny manidy azy ... tsy "araka ny sitrako" ( fantatra fa tsy misy zo tanteraka, misy fetra ny zavatra rehetra). Ny olana dia eto amin'ity tontolon'ny fananana manokana ity hevitra ireo dia mety hiteraka mangidihidy amin'ny mpamorona sy orinasa. Amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ny GPL dia azonao atao ny mamela ny mpampiasa anao hamidy indray ny vokatrao, na dia ho mpifaninana aminao aza. Tsy mitranga izany amin'ny faritra hafa. Raha mividy fiara ianao dia tsy omen'izy ireo ny rafitra na ny fahazoan-dàlana hamokarana azy ireo. Heveriko fa tsy tian'ny Ford ianao manavaka ny fiaranao ary maka lathe iray handika ny faritra tsirairay ary hametahana ny ozininao. Malalaka be ilay rindrambaiko ka azo adika an-tapitrisany nefa tsy manary kalitao, izany no mahasamihafa azy (izay heveriko fa hoy ny stallman na ny tranokala gnu). Fa imbetsaka ny rindrambaiko dia heverina ho toy ny vokatra ara-barotra, misy tsiambaratelo momba ny varotra, ary miaraka amin'ireo toetra ananan'ireo zavatra azo tsapain-tanana. Miankina amin'ny developer izany Te-hizara ny rindrambaiko ve ianao sa hieritreritra izany ho vokatra farany ahazoana fahazoan-dàlana?
Azo antoka fa izany no antony mahatonga ireo orinasa izay, amin'ny resaka roa sosona, mirehareha amin'ny maha-kapitalista azy nefa mankahala ny kapitalisma, mamorona sy miady amin'ny fampielezana hevitra tsy mahomby hanafika ny SL.
Raha toa ka mamela ny iray hafa hanidy ny fahazoan-dàlana GPL satria te hanana "programa maimaimpoana izay noforonin'ny AUTHOR maimaimpoana" izy satria "maimaim-poana izany", izay hetaheta mihoatra ny an'ny AUTHOR na an'ny an'ny hafa dia tombontsoa avy amin'ny asan'ny AUTHOR? manan-kery ve ny famelana ny fahalalahana esorina? Amin'ny fiarahamonina tsy misy fanandevozana, esorintsika ve ny "fahalalahana" hanapa-kevitra ny hanandevo olona hafa izay maniry hanao izany?
Heveriko fa tsy hanelingelina an'i Ford ianao raha te "hanamboatra" ny fiaranao (hanova azy araka ny itiavanao azy), esory ireo fitaovana hampiasana azy ireo indray, hampiasa izany na aiza na aiza no tadiavinao, na hamidy indray. Ary ahoana no heverinao fa fifaninanana amin'ny ny tsena malalaka dia raha tsy mahavita zavatra? mitovy amin'ny vokatra hafa? Ahoana no eritreritrao fa misy marika maromaro amin'ny fiara misy singa mitovy amin'izany? Misy olona mandrara ahy tsy hamorona maodelin'ny fiarako manokana amin'ny fandinihana ny fomba fiasan'ilay novidiko? Raha misy patanty amin'ny vokatra hafa toa ny misy amin'ny rindrambaiko, dia mety ho voarara mihitsy aza ny mampiasa "fiara misy kodiarana" satria efa nisy orinasa hafa nitazona azy.
"Malalaka be ilay rindrambaiko ka azo adika an-tapitrisany nefa tsy very kalitao" noho io antony io, ny rindrambaiko manana dia tsy amidy ho vokatra, fa "fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa". Ary raha heverinay ho vokatra io, azonao atao ve ny manamboatra fiara tokana ary mamerina am-polony heny an-tapitrisany ny fiara mitovy amin'io, ary tsy misy tena manana izany ary manan-jo hampiasa izany araka izay itiavany azy? lojika, ara-dalàna, ara-dalàna sa etika ny fanaovana an'izany? Sa hosoka io?
Stallman sy isika rehetra izay manaiky ny filozofia dia miady amin'ireo tsy fitoviana sy tsy fahamarinana ireo.
Amin'ity siansa tanora ity (siansa informatika) dia be ny tsy fahalalana (tsy misy fanafintohinana, voajanahary ny fisian'izany) sy ny fampahalalana diso (fanahy iniana?) Ary misy ny olona manararaotra (lasa mega-tapitrisa) ny tsy fahalalàn'ny ampahany lehibe amin'ny fiarahamonina.
Ny filozofia amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy mitady hanery olona hanome ny asany, na hampiasa rindrambaiko "ratsy kokoa" hafa, na hieritreritra "araka izay tadiavin'i Stallman": tadiaviny izany, amin'ity toe-javatra ity (izay, ambonin'izany, ankoatry ny famitahana anay dia mitsikilo izy ireo !!) AOKA ISIKA NY MASONAO ...
Tsy misy fomba mazava kokoa hanehoana ny filozofia Stallman noho ny morpheus tsara.
Na dia ny zava-misy aza ny tsirairay dia afaka manao ny tsy fahalalany izay tadiaviny….?
Soa ihany fa "safidy malalaka" dia namela namana virtoaly iray haneho ny fomba fijeriny momba ny rindrambaiko malalaka sy ny safidy malalaka. Amin'ny fanajana rehetra, tsy mahita fifandraisana misy eo amin'ny iray hafa aho. Toa ahy ny manao hadalana tsy misy dikany amin'ny voalohany, na dia mampiseho aza fa mitantana ny sasany amin'ireo singa ao aminy izy. Ilay heverina fa tsy fitoviana toa hitany mifanentana amin'ireo rindrambaiko manana, izay ilay tsy mamela ny mpampiasa hampihetsika sy hanamafy ny fahaleovan-tenan'izy ireo. Nanaitra ahy ny fanambarana tao amin'ny fehintsoratra farany momba ny lazaina fa "manifest" izay tsy miseho na aiza na aiza. Ny Manifesto dia zavatra hafa, fanambarana politika mahery vaika, tantara an-tsary. Heveriko fa tena ilaina ho an'ny maro amintsika ny manoratra tsara kokoa momba ny momba an'io sy ireo lohahevitra hafa aseho amin'ity boky ity. Misy fisafotofotoana be, aizina be, somary fankahalana ho an'ny GNUlinux, ary fandokafana be an'ireo demonia kapitalista.
Manaiky tanteraka aho.
Mahamenatra fa be dia be ny fampahalalana diso momba ireo olana ireo.
Ao amin'ny lahatsoratra dia misavoritaka ny hevitra momba ny maimaim-poana sy maimaim-poana na an'ny tompony sy ny karama.
Ny "safidy malalaka" an'ny mpampiasa rindrambaiko manana dia tsy misy, tsy mahalala izay tena ataon'ny programa amin'ny masininy sy ny angon-drakitra ao aminy. Raha tsy afaka manova azy io, mizara azy na mampiasa azy indray, ary na dia RESELL IT (ny lisansa GNU dia tsy mandrara ny fivarotana SL, dia mandrara ny FANATONANA azy, izay tena hafa tokoa (fa anontanio i RedHat)). Ny safidy malalaka dia eo am-pelatanan'ireo izay manao programa rindrambaiko tompona miaraka aminay mpampiasa. Afaka manao izay tiany hatao izy ireo, "raha mbola mandeha" ... izany no fandehany ...
Manana fahefana hisafidy ianao amin'ny fihinanana sakafo hanompoanao irery (na rindrambaiko manana) ary ny fihinanana sakafo an-trano (na rindrambaiko maimaimpoana). Ilay iray izay tsy nijanona hamaky ny fepetra sy ny fampiasa amin'ny rindrambaiko tsirairay (na tsy mahalala hoe manao ahoana ireo teny ireo), avy eo, dia tsy ampy saina tanteraka.
Heveriko fa somary diso ilay fampitahana.
Ny sakafom-panompoan-tena dia manana latabatra misy akora (kaody loharano) ka tsy azo atao lozisialy fananana.
Na dia eny aza, raha ny marina dia manana fahefana ianao (heveriko fa io no teny tadiavinao hampiasaina, tsy mihatra ny fahefana, satria teny ara-dalàna io, izay taratry ny sehatra na fananana fa tsy ny fahafaha-misafidy) hisafidianana ny sakafo Fantatrao amin'ny hoe inona sy ny fomba fanomanana azy, ary ny puree izay manandrana tsara dia mamelona anao, fa rehefa manontany an'ilay olona nivarotra azy ianao:
- Toy ny hena ny tsirony, fa tsy akoho, na hen'omby, na zavatra hafa efa nandramako hatrizay. Biby inona no ahazoan'izy ireo io hena io?
Mamaly anao izy ireo - Aza manontany, amin'ny fihinanana azy dia nanaiky ny fahazoan-dàlana ianao, tsy azonao atao ny mamakafaka azy hahalalanao ireo akora, tsy azonao atao raha ny aretim-pivalanana ho azonao rahampitso dia vokatry ny puree, tsy afaka manao puree bebe kokoa ianao, ary raha ho faty mosary ny zanakao Tsy azonao omena izany, satria ny vola naloanao dia tsy mahatonga anao hanana tompony, izahay ihany no manome alalana anao hihinana azy. 🙂
Ny zavatra momba ny sakafom-panompoan-tena dia mampino anao izy ireo fa vita amin'ny zavatra toy izany, ka mahatonga anao tsy hitady ny fomba nahandroana azy io ary raha tena nandrahoina izy io tamin'ny toe-javatra tokony ho lany tamina toe-javatra mety indrindra ho an'ny fihinanana olona. Toy izany koa no miseho amin'ny zava-pisotro mahery, izay amin'ny fiainana dia hanome anao ny fomba fahandro marina ny sirrup mba hahafahanao afangaro amin'ny rano karbonika (na rano mineraly karbonika), ary zarainao malalaka.
Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana dia manana fahefana hahafantatra izay "fangaro" ampiasaina ianao, ary azonao atao ihany koa ny mahafantatra hoe inona ny maody "fiomanana" ampiasaina amin'ny fanangonana rindrambaiko.
PS: Mba hamaranana ny lohahevitra tsy an-kijanona dia manome soso-kevitra anao aho amin'ny google na duckduckee "hisokatra cola" na "labiera maimaim-poana".
"Mahamenatra fa be ny fampahalalana diso momba ireo olana ireo."
Satria ianao no mamorona izany korontana izany. Ny lahatsoratr'i Eliotime dia mbola tsy takatra tanteraka akory; Tsy mitsikera ny filôzôfia misy rindrambaiko maimaimpoana izy, fa ho an'ireo izay mitsikera ny fampiasana - toy ny fitaovam-piadiana fanafihana- ny filozofia misy rindrambaiko malalaka:
«... ny angatahina dia ny fahamatorana ho an'ireo miaro ity toerana misy ny Free Software ity ary ny fandeferana (sy ny fanajana) an'ireo (izay) mbola tsy afaka misaraka amin'ny singa tompony noho ny antony iray na hafa. "
Inona no tsy tian'ny Eliotime? Raha ny fahitako azy dia ireto karazana fihetsika ireto:
Mahantra aho dixit:
"Na dia misy dikany aza ny tsirairay dia afaka manao amin'ny tsy fahalalany izay tiany ...."
Ary ny fampiasana ny adjectif "ignorant" dia tsy misy mahadiso, isika rehetra tsy mahalala amin'ny lafiny maro sy amin'ny fomba isan-karazany. Ny olana dia rehefa mampiasa an'io adjectif io amin'ny fomba maty paika sy na dia misy fanamavoana aza. Tena afaka manao izay tiany amin'ny tsy fahalalany ve ny tsirairay? Tsy mety kokoa ve ny miteny hoe "maro amintsika no mandray fanapahan-kevitra diso noho ny tsy fahalalana"? Ary tsy resaka semantika na hoe diso ny fahazoako azy, ny fomba fanehoana ny tena - «… samy afaka manao izay tiany hatao amin'ny tsy fahalalany rehetra ny tsirairay….» mampiseho ny fototra sy ny endrika.
Ary izany no zavatra manaitra.
Voalohany indrindra, ny fampiasana rindrambaiko manana dia tsy mametra ny fahafahako misafidy, na an'ny an'ny olon-kafa. Ankoatr'izay, tsy mametra ny fahalalahako akory izy io - tsy ny fahalalahan'ny hafa no resahiko fa ny ahy irery. Androany, amin'ny tontolo manerantany, tsy afaka miaina toa an'i John Connor miafina amin'ny SkyNet isika: raha mampiasa carte de crédit na debit isika; Manome ny angon-drakitra amina rafitra manana izahay… fa raha tsy manao izany izahay, dia miharihary amin'ny halatra, toa an'i Estallman. Mampihomehy, rafitra iray manana no namaha ny olany satria nangalarina ihany koa ny pasipaorony; ny masoivoho dia tsy maintsy nampiasa ireo rafitra fanaraha-maso izay notsikerain'i Richard, raha tsy izany dia tsy hiala ao Arzantina i Stallman.
Izaho manokana dia miombom-pihetseham-po amin'ny filozofia rindrambaiko maimaimpoana, fa tsy amin'ny ekstremista. Mino koa aho fa ny rindrambaiko manana dia mametra ny fahalalahana hitovy amin'ny an'ny rindrambaiko maimaimpoana, sa tena tsy mahalala fomba tokoa isika hieritreritra fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia ilay mpanao fahagagana masina izay hanafaka antsika amin'ny ratsy cybernetika rehetra? Raha mametraka Photoshop aho dia very ny fahafahako satria manome ny data-ko amin'ny Adobe aho ary tsy afaka manova na mizara ilay rindrambaiko; raha mametraka Gimp aho dia very ihany koa ny fahafahako satria mila mandany fotoana bebe kokoa aho mba hahomby tahaka ny amin'ny Photoshop. Avy eo, ny fahafahako misafidy dia mandanjalanja ireo zava-misy ireo araka ny toe-javatra iainako - sy ireo izay tsy misy olon-kafa - ary manapa-kevitra ny tenako aho hoe inona ilay rindrambaiko hampiasaina ary tsy misy olona, ​​tsy misy olona mihitsy, manan-jo hitsikera na hanontany ny fanapahan-kevitro raha tsy nahazoako alalana. Tondro.
Izany no angatahin'i Elotime ao amin'ny manifesto *: manaja ny fanapahan-kevitry ny hafa.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa mampiasa rindrambaiko manana dia tsy miraharaha ny fisian'ny fironana mampiroborobo ny tombony - tsy haiko satria tsy mampiseho ny fatiantoka mihitsy izy ireo, izay misy - lozisialy maimaimpoana, tsy miraharaha ny fisian'ny rindrambaiko maimaimpoana sy maro izy ireo. amin'izy ireo, na dia fantany aza, dia tsy liana izy ireo. Mety ho olona kamo ve izy ireo, te hiaina amin'ny fahanginana, andevo ary tsy te hianatra zava-baovao sy hanatsara ny tenany? TSIA. Tsotra sy tsotra izy ireo dia olona manana fahasamihafana sy tanjona samihafa. Sarotra be ve izany?
Tsy dia mifandrombaka amina zavatra iray izahay rehefa misy mpandraharaha sinoa mandoa $ 15.3 tapitrisa amin'ny iPhone 5 iray -http: //www.globalasia.com/actualidad/tecnologia/empresario-chino-paga-12-millones-iphone-5- de- diamondra - raha nanangona $ 12.8 tapitrisa ny Ubuntu Edge.
Mbola hanohy hanome tsiny ny hafa ve isika - mpamily tompona, Microsoft, Apple, Google, Facebook ... - sa isika no tsy manao tsara ny asantsika? Izany hoe, mino aho fa tian'i Eliotime hosaintsainintsika.
* miseho, ta.
(Avy amin'ny lat. Manifestus).
1. loc. matoanteny Asehoy izany, aharihary amin'ny besinimaro.
Ary ny tena antony nametrahako ny teny hoe manifest amin'ny teny nalaina, dia satria efa fantatro fa tsy horaisina ny hevitra momba an'io teny io, ary raha misy olona tsy mijanona mamaky tsara izay nosoratako dia manentana izy ireo flamewar avy whim fotsiny.
Araka ny 99%
Toa tsy mety amiko ny mampiasa tsy fitoviana syllogistic hanohanana ny hevitsika manokana ho toy ny tohan-kevitra amin'ny lohahevitra tsy haintsika.
"Raha mametraka Photoshop aho dia very ny fahafahako satria manome ny data-ko ho an'ny Adobe aho ary tsy afaka manova na mizara ilay rindrambaiko;"
»Raha mametraka Gimp aho dia very ny fahalalahako satria mila mandany fotoana bebe kokoa aho mba hahomby tahaka ny amin'ny Photoshop. »
Diso, hanombohana dia mampifangaro karazana fahalalahana samihafa isika,
Ny fahalalahan'ny SL dia misy fetrany voafaritra tsara, tsy misy resaka fahalalahana hamokatra (atomboka satria tsy misy izany, ahoana raha misy ny fahaiza-mamokatra ary miankina amin'ny fahalalan'ny olona).
Ho fanampin'izay, raha misy olona tsy mahay mampiasa photoshop fa raha apetrakao ity gimp ity dia hamokatra kokoa izy ireo, izany dia mampiseho fa ny fahalalahana na ny fahaizana mamokatra dia tsy mifandraika amin'ny fahazoan-dàlana hamokatra.
Azontsika atao ny manomboka amin'ny fanekena fa mpahay siansa amin'ny informatika miresaka olana ara-dalàna isika (izay mpiraki-draharaha amin'ny lalàna dia mihomehy ny eritreritsika betsaka.)
Te hiresaka momba ny fahalalahana isika, rehefa imbetsaka dia tsy mazava amintsika ny momba an'io ary izany no antony ampiasantsika ny fampitahana diso, ny fampifangaroana ny fahalalahana hisafidy amin'ny zon'ny tsy hitsikilo ohatra, ka mahatonga antsika hisafidy iray na ny iray hafa, rehefa milalao samy hafa dia mifanentana izy ireo, ary tokony samy hanana miaraka isika roa.
Ny zavatra hiarahako amin'ity dia ny fanaovana compute androany saika hatraiza hatraiza sy amin'ny olana rehetra (mivantana na ankolaka), izany no mahatonga antsika izay miaina an'io na toy izao, manome hevitra momba ny zavatra maro takatsika, mitarika fikorontanan-diso sy fampahalalana diso.
Indraindray amin'ny zavatra tsotra toy ny fampiasana ny teny hoe "safidy malalaka" izay, amin'ny famaritana, dia tsy mihatra eto, satria antsasaky ny olana momba ny fahafahan'ny olombelona misafidy ny ho aviny na raha toa ny zavatra rehetra dia ao anatin'ny drafitra masina nofaritan'ny andriamanitra sasany.
Ny olona iray amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana mandrara anao tsy handika programa iray dia tsy manala ny safidinao malalaka (izay tsy azo atao ny manamarina fa manana izany ianao).
Tsy mahita lesoka amin'ny fanjohian-kevitra aho. Ny fisafotofotoana dia ny hoe miady hevitra hatrany ianao fa ity lohahevitra ity dia momba ny rindrambaiko maimaimpoana fa tsia. Eliotime tsy miahiahy velively ny amin'ny tombotsoan'ny rindrambaiko maimaim-poana na ny filozofia. Ny napetrak'i Elio teo amin'ny latabatra amin'ny adihevitra dia ireo toerana mahery fihetsika izay ananan'ny maro amin'ireo mpankafy an'ity ankehitriny ity, izay, matetika, dia mifehy ny tsy fandeferana. Rano sy menaka.
Izany no hevitra.
Mazava ho azy, raha esorinao tsy ho ao anatin'io toe-javatra io ny toerako roa ary koa, esory ny fehin-kevitra, dia toa diso ny fomba fiasa. Azafady mba vakio indray izay nosoratako dia ho hitanao fa raha fintinina dia:
"Manapa-kevitra aho - ary tsy misy olon-kafa - mifototra amin'ny filako manokana sy ny loharano misy izay rindrambaiko azoko ampiasaina sy tokony hampiasaiko ary tsy misy manan-jo hitsikera ahy izany raha tsy mahazo alalana amiko"
Fahadisoana ve izany? Adihevitra ara-dalàna na ara-teolojia sarotra? Voa izay mamafy fikorontanana ve?
Farany dia manohy mijanona amin'ity fehezanteny nataon'i Friedrich Nietzsche ity aho "Ny faharesen-dahatra rehetra dia fonja"
Tsy manontany ny olan'ny rindrambaiko maimaim-poana aho amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, ny fanontaniako dia ny tsy asehon'izy ireo amin'ny zava-misy ary ny fanambarana ihany no mijanona amin'ny teny.
Ho an'ireo olona izay tena miasa mba hahafahany maneho ny tombotsoan'ny rindrambaiko maimaimpoana dia manao izany amin'ny alàlan'ny fampisehoana aminao lozisialy iray izay mamaha amin'ny fomba mandaitra ireo filàna izay mitaky indrindra, toy ny Blender, izay tena nahavita namaha ny tsy fisian'ny tonian-dahatsoratra. ary / na sary mihetsika 3D toy ny 3D Studio Max sy AutoCAD.
Ankehitriny, ny olana lehibe indrindra amin'ny lozisialy maimaim-poana dia ny tsy fitovizan'ny paradigma misy, ankoatry ny tsy fandalinana amin'ny antsipiriany ny antony tena ampiasany programa manana izany. Mazava ho azy fa tsy mitovy ny mampiasa Adobe Photoshop amin'ny hoe GIMP, satria ny teo aloha, ny fiasan'ny fitaovana ampiasainy dia manamora kokoa ny fanovana sary amin'ny alàlan'ny fanovana ireo endrika samihafa fisie sary; ary ny faharoa, dia voafetra amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitaovana amboniny kokoa noho ny Photoshop sy / na ny Paint Shop Pro, ary koa tsy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny endrika sary matihanina (TIFF, TARGA, ...), Ankoatr'izay, amin'ny tranga maro, rehefa manonta amin'ny takelaka sy / na mpanonta toa ny HP sy / na Epson (miaraka amina cartridges tany am-boalohany, mazava ho azy) dia hafa tanteraka ny vokany.
Averiko ny nolazaiko teo am-piandohan'ny hevitra nataoko.
99% no nifanarahana, tsara ho ahy ny atiny, fa tsy ny endrika.
Manohana tanteraka aho fa tokony hanaja ny fanapahan-kevitry ny hafa ianao.
Raha ny marina dia tsy miady hevitra amin'izany aho, manasongadina ireo lesoka lojika mba hialana amin'izy ireo.
Fanahy iniana na tsia, fa lazao ...
"Ny marina dia misy ny tsy fitoviana eo amin'ny filozofia Rindrambaiko Malalaka sy ny filozofia fahalalahana misafidy"
"Ho fanampin'izay, izy ireo dia manome soso-kevitra izay fahazoan-dàlana maimaim-poana izay tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana ny kaody loharano sy ny binary hahazoana tombony.
Ary izany rehetra izany, na tiantsika na tsy tiana, rehefa navoaka tamin'ny haino aman-jery be mpamaky toa an'ity, dia mamorona hevitra eo amin'ireo mpamaky, noho izany dia mila mitandrina ianao amin'izay soratanao, satria mety ho diso fampahalalana diso io, ary miafara amin'ny mamaky zavatra toy ny:
"Ny SL dia ho an'ny hipopotama sy kominista"
"Amin'ny SL dia tsy afaka mahazo vola ianao"
"Tsy misy rafitra fiasan'ny GNU"
"Tsy mampiasa Linux aho (Ka raha tsy misy GNU), mampiasa Ubuntu aho"
"Tsy milaza ny GNU / Linux aho satria teknika izany."
"Tsy liana amin'ny fiainako manokana aho, na izany aza efa very izany tamin'izaho tao amin'ny mailaka"
Ny olana dia miankina indrindra amin'ireo paradigma ananan'ny olona tsirairay. Raha tsy fantatrao izay mampifanaraka ireo miankina amin'ny fampiasana rindrambaiko tompona, dia tsy hitondra soa izany trompetra izany.
Vakio tsara izay nolazaiko momba ny Hotmail. Tsy nisy fotoana nolazaiko ve fa tsy liana (na liana amin'ny) fiainana manokana aho; ny mifanohitra amin'izay aza dia aleoko tsy henjehina satria "mandika ny zon'ny mpamorona", raha ny marina dia manao ny iray amin'ireo fialamboliko.
Ny ampahany tsy mety amin'ity lahatsoratra ity dia tsy ny fahalianana (na dia nametraka zavatra tsy nataoko na nesoriko zavatra aza aho dia manome fialantsiny), raha tsy ilay teny hoe "Very aho", ny zonao (izay tsy mitovy amin'ny fahalalahana) amin'ny fiainana manokana, tsy very izany, amin'ny maha olombelona anao dia manana azy maharitra ianao, ny fanekena fahazoan-dàlana manararaotra dia tsy hahatonga anao ho very, raha toa ka mampiasa ny data-nao ny orinasa manitsakitsaka ny zon'olombelona fototra, dia ny orinasa izany. tsy mety izany ary afaka mitsikera / miaro tena ianao, tsy tianao na tsy fantatrao fa anjaranao izany, fa ny famoahana vaovao diso / diso dia olana ankapobeny.
Ohatra iray hafa:
"Ho fanampin'izay, tsy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny endrika sary matihanina amin'ny alàlan'ny default (TIFF, TARGA, ...)"
Manokatra sy mitahiry rakitra miaraka amina endrika TIFF na TARGA amin'ny gimp 2.8 aho, angamba tsy misy ny safidy rehetra atolotry ny photoshop, saingy manomboka eo ka milaza fa tsy mifanaraka dia misy lavitra, ary miaraka amin'izany fampahalalana diso izany.
Mazava ho azy eny, fa ny tena takiana amin'ity karazana rindrambaiko ity dia ny fiatrehany ny zava-drehetra vonona hampiasaina, izay kamo ny olon-tsotra hanamboarana ny zava-drehetra mba hiasa tsara.
Ankehitriny, raha misy andrim-panabeazana nampianatra famolavolana sary miaraka amin'ny GIMP, Inkscape ary / na Scribus, dia tsara izany, satria tsy hiankina amin'ny vokatra Adobe ianao na hamoaka "tsy ara-dalàna" ny zavatra noforoninao.
"Mazava ho azy eny, fa ny tena takiana amin'ity karazana rindrambaiko ity dia ny hoe efa tonga miaraka amin'ny zava-drehetra vonona hampiasaina izy ireo, izay kamo ny olon-tsotra manamboatra ny zava-drehetra mba hiasa tsara."
Voalohany dia ilaina ny mamaritra ny atao hoe "karazana rindrambaiko", satria raha ny fahalalako azy dia angatahina amin'ny lafiny teknika ny karazana rindrambaiko rehetra mba hiasa ary tsy handiso ny OTB.
Fa ny hevitry ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny politika fa tsy ara-teknika.
Amin'ny lafiny teknika tsy misy fahasamihafana, mitovy ny fiteny ampiasaina, ny syntax mitovy, ny API ihany, sns. (na lisansa mitovy amin'izany aza, raha mampitaha amin'ny loharano misokatra)
Ny hany zavatra angatahina amin'ny SL (mitaky, hoy aho) dia ny fanajana ny fahalalahana 4.
"Ankehitriny, raha misy andrim-panabeazana nampianatra famolavolana sary miaraka amin'ny GIMP, Inkscape ary / na Scribus, dia tsara izany, satria tsy hiankina amin'ny vokatra Adobe ianao na hamoaka ny zavatra noforoninao tamin'ny fomba" tsy ara-dalàna ".
Toa tonga lafatra amiko fa any an-tsekoly dia ampianarina ny photoshop, satria fitaovana tsara dia tsara, tsy ratsy ho an'ny hafa ny hampianarina azy, fa anio kosa ny photoshop no tsara indrindra ary tsy maintsy ampianarina.
Ny zavatra iray hafa dia ny tsy hialana amin'ny fiankinan-doha amin'ireo programa manana fahazoan-dàlana mamela ny fampiasana azy ireo tsy misy fandoavam-bola mialoha, satria misy safidy betsaka kokoa, tsy ny fampianarana Gimp sy ny orinasa fotsiny.
Raha namoaka Photoshop i Adobe, dia hanana rindrambaiko tena tsara sy maimaim-poana ianao, toy ny hanohizanao hangataka fa tsy hahomby izy ary hamela anao hamokatra.
Fantatro fa tonga eto ny olan'ny vola ary tsy hanafaka izany velively i adobe.
Saingy efa nanazava izahay fa tsy mandrara ny tombom-barotra ny rindrambaiko maimaimpoana (http://www.gnu.org/philosophy/selling.es.html) ary ny fanapaha-kevitra hanafaka azy dia iraisana ka tsy misy antony tokony hilazana azy.
Ahoana raha afaka miresaka isika no mety ho tranga mety hitranga raha navoakany izy ary ho mpahazo tombontsoa (na hanisy ratsy) ireo antoko.
Ka mety ho ...
- Adobe dia hanolotra kinova fototra efa voaomana (tsy hiantso azy io ho tsy azo antoka) sy kinova premium, miaraka amin'ireo plugins rehetra, fanohanana ary tombontsoa hafa.
- Ary ny kaodiny tsy misy fanangonana, miaraka amin'ny plugins misaraka, ary tsy misy fanohanana.
Ka na iza na iza te hanana photoshop premium nefa tsy mandoa vola dia mila misintona ny kaody ary manangona ny efa ho 2 gig izy, ampio ny plugins an-tongotra ary tsy misy tohana.
Ho an'ireo orinasa izay tena mandoa photoshop anio, tsy safidy izany, mora kokoa ny mividy azy io, manana fanohanana ary mampihena ny hetra, bebe kokoa miaraka amin'ny tombony fa efa afaka io.
Vitsy no ho be herim-po hanandrana (ary vitsy no hahatratra) izany asa fanangonana sy fanangonana izany rehetra izany.
OffTopic, Ahoana no ahafahako mandefa zavatra amin'ny tranokala? Ampy ve ny mandefa azy amin'ny alàlan'ny mailaka mba hojerena ary angamba ekena?
Mieritreritra aho fa tsy azonao ny mahatsikaiky.
asdevianina dia hoy izy:
hevitra: ny marina, maro amintsika no ampirisihina hanandrana safidy hafa maimaim-poana, raha mamela antsika ny fitoniana, tsy ho an'ny maimaimpoana loatra, fa ny fiarovana omeny antsika mba ho afaka, raha ny amiko manokana, ny fe-potoana « tokony maimaimpoana foana ny tranonkala ", fa manome fampiononana be dia be amintsika ny google, raha vao miresaka aho, vao tsy ela akory izay no nahitako diaspora, tena milamina sy milamina izy io, tsara tarehy ary loharanom-baovao misokatra voafaritra, (ny marina natomboko hampiasa azy io satria mahasarika ahy ny hatsarany XD,) Toy izany koa no mitranga amin'ny firefox, na dia tsy tiako aza ny amboahaolo manao zavatra amin'ny planeta, dia ovako ny sary masina ary mijanona izy, tsy maintsy ekentsika fa mozilla dia miezaka mitazona an'ity maimaim-poana ny tranonkala, ary mampidi-doza be ho an'ny olona tsy fantatrao Fantatr'izy ireo izay ataon'ny fototra toy izany, ..
eny, raha tsapanao izany, andao http://forodiaspora.com.ar/viewtopic.php?id=25 , ary manantena aho fa hahita lahatsoratra momba izany http://chakra-project.org/news/index.php?/archives/109-Chakra-2013.09-Fritz-ISO-released.html .. 🙂 ny marina dia be ny tebiteby any .. XD (:
Mamaly an'i asdevian
Misy hevitra mitovy amin'izany ve ato amin'ity bilaogy ity? Anananao izany @lalahy zalahy ary ny @Tina Toledo. Ary manana a Ida y manidina (miaraka amin'ny Requiem) avy amin'i Gabriela González momba ny zavatra niainany niaraka tamin'ny Windows sy Linux.
Ny rindrambaiko maimaimpoana sy maimaimpoana dia azo ampiharina fa tsy teorika.
Na koa, mifamatotra akaiky izy ireo ka misy fiantraikany amin'ny iray hafa.
Asa ny mahita izay NSA sy ny vokatr'izy ireo eo amin'ny tontolon'ny teknolojia.
Raha tsy nisy ny Rindrambaiko Maimaimpoana, dia nifindra tany amin'ny shit iray ihany isika rehetra.
Tsy hisy fomba hiarovan-tena amin'ireo biby goavambe ataon'ny orinasa ireo.
Izay no tiako ho takatrao, fa hatreto dia misy olona maditra tsy mahalala.